Maitiro ekugadzira yakakwana meta tsananguro yako yekumisikidza | ECommerce nhau
Maitiro ekugadzira yakakwana meta tsananguro
Paunenge uine peji rewebhu, chinangwa chikuru chaunozvisarudzira ndechekuti ine vashanyi vakawanda. Kuti uite izvi, iwe unodzidza nezvekumisikidzwa kwewebhu, nezveSEO, iwe unoisa mapulagi anozivikanwa uye unongwarira zvese mumusoro uye mumazwi ari kuzotsanangura mitsara yako yekutanga. Izvi zvinogona kutsanangurwa mune meta tsananguro, ndiko kuti, ndima iyo inopa pfupiso yezvichawanikwa nemuverengi muchinyorwa.
Vazhinji vanofunga kuti izvi hazvina kukosha sekuisa zita rakanaka, kana mufananidzo unokanganisa. Asi nyanzvi dzinoziva kuti izvi handizvo. Iyo meta tsananguro inogona kunge iri "tambo" iyo inokonzeresa kudzvanya pane yako posvo. Uye, kana iwe uchikwanisa kutora vaverengi nechidiki ichocho, chinhu chinowanzoitika ndechekuti vanodzvanya pachinyorwa uye vachiverenga, zvinoreva kuti vanoshanyira webhusaiti yako. Zvino, iwe unowana sei iyo yakakwana meta tsananguro? Isu tichakuudza.
1 Mira ... ndeipi meta tsananguro?
2 Chii chinofanirwa meta-tsananguro inofanirwa kuve yakakwana
3 Makiyi edudziro yako meta kune enchant yekutsvaga injini
3.1 Iwo mazwi eiyo meta tsananguro
3.2 Usadzokorora meta tsananguro
3.3 Bheja pane mazwi "goridhe"
3.4 Dzivisa misungo, ivo havangakubatsire iwe
3.5 Iyo fomula yakakwana yeiyo meta tsananguro
Mira ... ndeipi meta tsananguro?
Usati wataura nezve makiyi ekuzadzisa meta tsananguro inokupa iwe mukana wakakura wekushanyira webhusaiti yako, kana eCommerce yako, zvakakosha kuti utore chimwe chinhu uchifunga nezvacho: tiri kutaura nezvei?
Meta tsananguro ndeye chinyorwa chidiki, chemavara anosvika zana nemakumi matanhatu, chingangopfupisa zvemukati izvo mushandisi ari kuzowana pane peji rewebhu. Mune mamwe mazwi, inzira yekubata vashandisi. Aya, kana uchitsvaga paInternet, wana runyorwa rwemapeji pane ruzivo rwavanogona kunge rwuripo. Uye pachinzvimbo chekuenda imwe mushure meimwe, nekuverenga iwo iwo madiki mameseji ivo vanofanirwa kuwana pfungwa yezvavari kuzowana.
Chinyorwa ichi hachisi chema blog zvinyorwa chete; kana zvigadzirwa zvechitoro chepamhepo. Chaizvoizvo, zvakakoshawo kune chero peji rakagadzirwa pane webhusaiti, ingave iri rekubata peji, iyo peji rekumba, isu tiri ...
Ichi chiitiko hachiwanzo kutarisirwa, uye zvakadaro chakakosha, kwete chete kupa pfupiso yezvichawanikwa nemushandisi, asi nekuti zvinobatsira Google kuziva zviri papeji.
Zvakare, kana tikazvibatanidza neiyo yakanaka SEO uye kiyi kiyi nzira, Iyo meta tsananguro inogona kuvhura mikova yakawanda kwatiri uye kuita kuti zvive nyore kwauri kuti uise webhusaiti yako.
Chii chinofanirwa meta-tsananguro inofanirwa kuve yakakwana
Iye zvino zvaunenge uchinyatsoziva zvatiri kureva, inguva yekuziva kuti ndeapi hunhu hunodiwa kuti izvi zvive zvakakwana kwete kwete chete injini dzekutsvaga, asiwo vashandisi pachavo.
Kutanga, iwe unofanirwa kuziva izvozvo rondedzero yemeta inogona kungova nemavara zana nemakumi matanhatu chete. Muchokwadi, mune dzimwe nguva zvinokurudzirwa kuti iwe usasvike izvo, asi gara pane gumi nematanhatu. Pamusoro pezvo, mune ino zvinyorwa zvidiki (izvo zvinowanzo kuve mazwi makumi maviri kusvika makumi matatu), unofanira kuisa izwi kana mazwi akakosha wasarudza iyo peji, chinyorwa ... Semuenzaniso, kana peji racho richibva kuchitoro chepamhepo kwaunotengesa "magetsi emagetsi", iri rinogona kunge riri iro kiyi rinofanira kunge riri mune iro diki chinyorwa.
Imwe nyanzvi yekunyengedza ndeye shandisa iro kiyi kaviri. Kana mushandisi akatsvaga iro iro izwi, iro rinoonekwa kaviri muchinyorwa chimwe chete rinoita kuti ziso remunhu rikwezve kutariswa. Iyo ipfungwa nzira inogona kukubatsira iwe.
Iyo meta tsananguro haifanire kunyorwa kune Google marobhoti. Ndokunge, hazvigone kuve zvisina kujairika, kana kutsvaga chinzvimbo chete uye zvega. Unoda kuti chive chinhu chakasarudzika, chakanyorwa zvakasikwa, uye chinonyatsonzwisiswa.
Makiyi edudziro yako meta kune enchant yekutsvaga injini
Unoziva kuti chii, unoziva hunhu hwayo. Zvino, ngatisvikei kuchinhu chakakosha chaizvo: chii chaunofanira kutsvaga paunenge uchiita meta tsananguro yewebhusaiti yako, eCommerce, blog, chinyorwa ...?
Kunyanya, tinokurudzira aya makiyi:
Iwo mazwi eiyo meta tsananguro
Hatisi kuzodzokorora izvo zvatakakuudza kare, asi tiri kuzosimbisa zvimwe zvinhu zvaunofanira kufunga nezvazvo:
Usambofa wakapa zvinyorwa zvese izvozvo. PaInternet, kunyora nemavara makuru zvinoreva kuti urikupopota, kana kutsamwa, uye panogona kuve nedudziro dzakaipa mune izvo zvaunoda kuisa, kana kuti zvinotorwa nepfungwa yekuti, kwete zvachose, ndizvo zvawanga uchida.
Usaise mamwe mazwi futi, sekunge iwe waida kuvaratidza. Zvese zvinoita kuvhiringidza vanhu.
Masara zvakanaka. Quotation mamaki haana basa kune yekutsvaga injini. Kwete izvozvo chete, vanogona kudzosera kumashure, saka edza kuzvidzivirira pazvinogoneka.
Usadzokorora meta tsananguro
Ngatiti iwe une zvigadzirwa zviviri zvakafanana, asi chete iro rakasiyana misi. Uye iwe unoti: zvakanaka, chigadzirwa chimwe chete, yakafanana meta tsananguro. HAPANA! Kukanganisa kukuru. Nyanzvi pachezvadzo dzinotinyevera kuti zvirimo zvakadzokororwa, kuteedzerwa, kunyorwa… PaInternet zvinoita kuti Google itange sairini uye, unoziva here zvekuita?, Kuranga webhusaiti yako.
Saka gara uchiedza kupa zvakasarudzika zvemukati kune chero webhusaiti yauinayo, kune chero chinyorwa chaunogadzira uye kune chero chigadzirwa muchitoro chako chepamhepo.
Bheja pane mazwi "goridhe"
Hauna kunzwa here nezvavo? Kune mazita mazhinji ekureva kwavari, asi kuve "kwakagadzirwa nendarama" imhaka yekuti iwo mazwi ano "fambisa" vanhu. Semuyenzaniso: Nyengedza, dzidza, tsvaga, fungidzira ... Zvese izvi zviito zvaunobvunza zvisina kujeka kumuverengi, uye zvakadaro zvinoshanda chaizvo nekuti huropi pachahwo hwakaitwa.
Saka kuvashandisa mumeta tsananguro hunyanzvi hwekubata.
Dzivisa misungo, ivo havangakubatsire iwe
Pamwe iwe unogona kufunga kuti iyo meta tsananguro, nekuti icho chinhu chakakosha kune injini dzekutsvaga, dzinofanirwa kutariswa padziri, uye unotanga kuisa mazwi ekuzadza nemazwi akakosha uye nechimwewo chinhu. Asi izvo zvichatora kukuvara kwako mukufamba kwenguva. Kutanga nekuti Google's algorithm yatove kukwanisa "kunzwisisa" zvakanyorwa, uye kana ikaona kuti usingaipe pfungwa yechisikigo, inogona kupedzisira yakukanda kumashure mumhedzisiro yeinjini yekutsvaga.
Iyo fomula yakakwana yeiyo meta tsananguro
Kupedzisa, isu tinoda kukusiya iwe pazasi inogona kunge iri nzira kwayo yakakwana yemeta tsananguro. Iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti inofanirwa kuenda zvinoenderana nemusoro wenyaya, nekuti combo yeese maviri ndiyo ichawedzera kushanya kwako.
Chaizvo, kune meta tsananguro iwe yaunofanirwa:
Dzokorora iro rakakosha ka2.
Tanga neshoko rine simba, rimwe re "goridhe." Kazhinji izvi zviito zvekuita izvo ndizvo "zvinofamba".
Ipa dambudziko ravanaro uye ravanogona kuratidzwa naro.
Ipa mhinduro kune iro dambudziko.
Kana uchikwanisa kuzviita, saka unenge wakunda muhondo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEO » Maitiro ekugadzira yakakwana meta tsananguro
Maindasitiri kushambadzira: chii icho, zvinangwa uye nemaitirwo azvo